Daty maty aseho? Twitter - Fitaovana fitantanana AP vaovao | Martech Zone
Daty maty aseho? Twitter - Fitaovana fitantanana AP vaovao
Talata, Aogositra 11, 2009 Alahady 24 aprily 2016 Lorraine Ball
Tao anatin'ny toe-tsaina ratsy aho omaly satria nanenjika ny faktiora efa tara tamin'ny mpanjifa telo aho. Saro-kenatra aho, ary mila mivoaka, ka dia nametraka fanamarihana tsy manan-tsiny (tsy dia manan-tsiny loatra) tao amin'ny Twitter aho. Nanontaniako:
Rehefa tsy mandoa faktiora ny mpanjifa iray ary miala amin'ny antso an-tariby ataonao dia endrika ratsy ny manonona azy ireo amin'ny anarany ao amin'ny Twitter?
Ny valiny azoko dia avy amin'ny namako nilaza tamiko fa hevitra ratsy be io, ho an'ny vitsivitsy izay nahatsapa fa mety hahomby, ho an'ny sasany izay nandinika azy io ary hevitra mahafinaritra vitsivitsy tao anaty mix: Ny tiako indrindra:
@wolfems izay nilaza hoe: “tiako io… Ataovy amin'ny alahady ary mety ho marika vaovao izy, SundayShame. Ny endrika vaovao fitantanana AP.
Na dia miahiahy aza aho fa handefa fanamarihana DEADBEAT atsy ho atsy, dia nametraka fanontaniana vitsivitsy mahaliana izany. Rehefa manao mangarahara kokoa ny orinasa, hanao mangarahara ve ny fifanakalozana rehetra? Ary manimba sa fanatsarana ny fifandraisan'ny orinasa izany?
Tsy manana ny valiny aho, fa te-handray valiny. Inona no tsapanao momba ny fanaovana fampahalalana misimisy kokoa ho an'ny besinimaro, ary ahoana ny fampiasanao ny media sosialy ankehitriny hanaovana izany?
Tags: deadbeathenatra ampahibemasomahamenatramarketing ara-tsosialymahamenatra ny media sosialyTwittermahamenatra ny twitter
Lorraine Ball Tuesday, August 11, 2009 Sunday, April 24, 2016
Lorraine Ball roapolo taona tao amin'ny orinasa amerikana, talohan'ny nahatsapany saina. Androany dia azonao atao ny mahita azy ao Roundpeg, orinasam-pivarotana kely, monina any Carmel, Indiana.
Miaraka amin'ny ekipa manan-talenta miavaka (izay misy saka Benny & Clyde) dia mizara izay fantany momba ny famolavolana tranonkala, fidirana anaty, media sosialy ary marketing amin'ny mailaka.
Nanolo-tena handray anjara amin'ny toekarena mpandraharaha mavitrika ao afovoan'i Indiana i Lorraine, ary mifantoka amin'ny fanampiana ny tompona orinasa kely hanana fifehezana amin'ny marketing.
Hevitra momba ny anaran'ny mpitsara avy amin'ny fijerin'ny mpijery
Tsena toa ny bilaogera renim-pianakaviana
11 Aogositra 2009 amin'ny 6:10 PM
Raha mijery fanangonana karazana forum ianao dia mandefa traikefa amin'ny fifampiraharahana amin'izy ireo, izany hoe fifanakalozana karama. Ankehitriny, tsy dia mitovy angamba izany amin'ny mason'ny matihanina sasany toy ny fifanakalozana 'raharaham-barotra' tena izy, fa misy orinasa sasany niseho. Izay no antony nanokanan'ireo olona ireo fotoana hanaovana lisitr'ireo 'mpivarotra tsara' sy hanome tolo-kevitra.
Mijery ny fitsipika volamena aho, manao amin'ny hafa…. Mila olona mamoaka zavatra tena ratsy amin'ny anarako ve aho? Tsia. Tokony hanao fampiharana mafy orina ve aho - Eny. Izay hisorohana izany tanteraka.
Tsy hanome soso-kevitra ny hanonona olona / orinasa amin'ny anarany mihitsy aho, satria hita taratra amin'ny toetranao izany amin'ny farany. Fa raha manana karazana persona an-tserasera tsy anaran'ny anarany marina izy ireo, dia mieritreritra aho fa rehefa vita tsara izany dia mety raha mety ny mampitandrina ny hafa.
11 Aogositra 2009 amin'ny 6:15 PM
Izaho dia mila fampandrenesana henjana aloha, Lorraine. Tsy manana olana amin'ny famoahana ireo maty maty aho - raha mbola fantany ny vokany. Ny laharako dia mailaka> feo> mivantana (raha azo atao)> mpisolovava… ary raha mbola tsy misy valiny = ampahibemaso.
Eo afovoan'ny fanombohana aho izao ary manana faktiora miavaka maromaro; na izany aza, nanana fifanarahana tamin'ny mpivarotra izahay fa tsy afaka mandoa vola izahay raha vao mahazo famatsiam-bola. Manantena aho fa tsy hahita ny anarako amin'ny Alahady Deadbeat atsy ho atsy!
11 Aogositra 2009 amin'ny 2:54 PM
Azo antoka fa fanitsakitsahana ny fifanarahana ara-tsosialy io. Manantena ny olona ny hitahirizana izany vaovao izany, indrindra ny momba ny fotoana sy ny fomba andoavana ny faktiora.
Na izany aza, azonao atao ny manangana eo alohan'izay miaraka amin'ny mpanjifa izay hamoahanao ny angona kaontiny rehetra azo aloa, na tsara na ratsy. Izy io dia mitovy amin'ny adihevitra momba ny karama miafina - afaka manaraka ny tohan-kevitra ny olona rehetra, saingy goavana loatra ny fiheverana ny ankamaroan'ny olona ny fanaovana ilay switch.
Aug 13, 2009 amin'ny 3: 08 AM
Miara-miasa amin'ny mpanjifa izahay ary mitondra faktiora mandritra ny volana maromaro. Ny lava indrindra dia ny mpanjifa izay nandoa 200 $ / volana nandritra ny 18 volana. Tsy maninona aho raha mbola miresaka amiko izy ireo.
Mety tsy te hanao an'io mihitsy aho, fa ny fanoratana azy dia nahatonga ahy hahatsapa ho tsara kokoa! Misaotra tamin'ny tamberina.
14 Aogositra 2009 amin'ny 3:07 PM
Heveriko fa ny fandefasana ny lisitry ny mpanjifa maty dia hahavita na inona na inona –koa tsy tezitra ny mpanjifa vao handray andraikitra ara-dalàna. Inona koa, tsy… ..nice. Etsy ankilany, mety hisy vokany tsara ny taratasy misy teny hentitra avy amin'ny mpisolovava anao.
Matetika aho no nieritreritra fa mety hahasoa ny fananana lisitra "maditra / mahafinaritra" eo amin'ireo mpiara-miasa amin'ny indostria mba hialantsika amin'ny fanaovana asa ho an'ny mpanjifa izay tsy hitondra antsika tsara.
14 Aogositra 2009 amin'ny 3:08 PM
Amin'ny maha-tompona orinasa kely manana fantsom-bola voafetra, araka izay itiavako azy, dia hamboariko ny hevitr'i Jay. Faly ve aho mahita ny anarako bitsika noho io antony io? Tsia. Sa izaho ve manana olana amin'ny fisiahana bitsika momba ny traikefa amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa mahantra (na miavaka)? Tsia mihitsy!
14 Aogositra 2009 amin'ny 3:09 PM
Tazomy manokana izany! Indray andro afaka miodina ny raharaha ary tsy te-handoro tetezana ianao. Mino aho fa ny vintana dia raha mihaza vola ianao ary toy izany koa ny maro hafa. Hitako fa ny ankamaroan'ny olona dia te hanao ny tsara ary mandoa ny faktiora. Mampalahelo fa rehefa miadana ny karama amin'ny lafiny azo dia miadana eo amin'ny lafiny aloa izy ary mandeha toy izany koa ny rojo. Ity toekarena ity dia mila fahatsiarovan-tena sy fahatsapana avo kokoa izay hifanampy amin'ny fifanohanana eo amin'ny sehatry ny asa mandra-pahitantsika ny fihodinana lehibe sy ny fanarenana ity toekarena ity.
14 Aogositra 2009 amin'ny 4:27 PM
Tsapako manokana fa tsy mahalala fomba ny fandefasana momba ny mpanjifa.
izy ireo dia mety manana antony ara-dalàna amin'ity toe-karena ity raha tara ny fandoavam-bola, ohatra, ny fahaverezan'ny asa sns. ary menatra ary tsy mahazo antoka izay tokony ho noho ny toe-javatra.
tsy maintsy mitandrina ihany koa ny zavatra avoakanao momba ny olona tezitra.
Voaroaka 7 taona lasa izay avy amina orinasa lehibe eto aho ary vao nahalala fa manana kaonty twitter ny mpitantana ahy taloha avy amin'io orinasa io ary mandefa lahatsoratra mandainga feno fankahalana momba ahy ary tsy azoko antoka ny antony?
15 Aogositra 2009 amin'ny 7:35 PM
Amin'ny toe-java-bita sy rihitra, tsy izany ve no toy ny fandefasana ny fizahana ratsy ataon'ny olona iray eo ambonin'ny fisoratana anarana? Etsy ankilany, arakaraka ny mpijery, izy io dia mety hahatonga ny afisy hijery ratsy be toy ny fe-potoana maty, ary tsy tianao izany.
Avelako ho afa-baraka eo imasom-bahoaka izany. Misy hatrany ny Tatitra Ripoff.
Aug 16, 2009 amin'ny 12: 17 AM
Ny olona mivoaka trosa aminao dia manao zavatra telo:
1. Mampiseho ianao fa tsy azo atokisana hiatrika toe-javatra sarotra amin'ny fahendrena.
2. Raha sendra olana ny mpanjifanao dia mety hamono ny fikasan'izy ireo manangona vola ny postanao na mahazo ilay fifanarahana izay handoa anao.
3. Amin'ny alàlan'ny fivoahana ny mpanjifanao dia mandefa famantarana amin'ireo mpanjifanao ho avy ianao fa hikarakara azy ireo amin'ny fomba mitovy.
Tokony hivoaka amin'ny olona fotsiny ianao rehefa nanapa-kevitra ny handray azy ireo amin'ny fitsarana. Voatifitra ny fifandraisana tamin'izay fotoana izay.
16 Aogositra 2009 amin'ny 3:14 PM
Toy ny mahazatra ny fotoanako nandany ny famakiana ny lahatsoratr'i Doug dia nanaporofo ny fampiasam-bola be tamin'ny androko. Isika rehetra dia afaka mifandraika amin'ny foto-keviny, izay tsy teo amin'ny lafiny roa amin'ilay scenario ary tsy mahazo aina ny eo amin'ny toerana roa.
Tsy nisy fahavoazana natao tamin'ny famotsoran-kelokao ary hitako fa niteraka valiny bebe kokoa ianao, hita rehetra, tsy nampoizinao.
Amiko Andriamatoa Karr, ity dia ohatra iray hafa amin'ny tena hery sy soatoavina ao anatin'ny Smaller Indiana… tsy tokony hisalasala na hanao ambanin-javatra isika fa mety misy dikany ny eritreritsika amin'izao fotoana izao amin'ny famoahana ireo fomba fijery avy amin'ireo mpiara-miasa fantatra sy tsara fikasa.
Ny mpamaly tsirairay eto dia nanampy ny atiny mahasoa ary amin'ny fanaovany izany dia namela ahy hanitatra ny tontoloko tamin'ny fampahalalana ary nanankarena ahy tamin'ny fomba lehibe lavitra tamin'ny fanehoana bebe kokoa ny toetrany sy ny faharanitan-dry zareo ary manome ohatra iray indray ny amin'ny lanjan'antoka loharanom-pahalalana ho an'ny Smaller Indiana. isika rehetra.